किन बढ्यो देउवासँग शशांकको दुरी?
लिलु डुम्रे बिहीबार, चैत ६, २०७६, १७:१८
काठमाडौं- निर्वाचनमा पराजयलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चौतर्फी आलोचना हुँदा देउवाको रक्षाकवच बनेका थिए, महामन्त्री डा शशांक कोइराला। तीनै तहको निर्वाचनबाट पार्टी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको विश्लेषण भयो। ‘शर्मनाक’ हारको मुख्य जिम्मेवार सभापति देउवा भएको भन्दै उनको कार्यशैली र क्षमतामा अनेक प्रश्न उठे। तर सभापति देउवाको आलोचना महामन्त्री कोइरालले गरेनन् बरु बचाउमा महामन्त्री कोइरालाले भन्थे, ‘मैले पनि सभापतिको आलोचना गरें भने पार्टी कसरी बलियो हुन्छ? सभापतिलाई गाली गर्न मेरो पदीय भूमिकाले दिँदैन।’
१३औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट महामन्त्रीमा विजयी भएका कोइरालालाई आफ्नै समूहबाट आलोचना भयो। तर, उनले सहे। विगतमा सभापतिको विरोधमा अभिव्यक्ति नदिनुको कारण उनले पार्टीलाई थप क्षति हुनबाट बचाउनका लागि भएको कोइरालाको दाबी छ। गत शुक्रबार सभापतिलाई लेखेको पत्रमा उनी लेख्छन्, ‘आम निर्वाचनपछि पार्टीमा उत्पन्न विवादबाट पार्टीलाई थप क्षति नहोस् भनेर मैले धेरै साथीहरूको आलोचना सहँदै सभापतिज्यूलाई सहयोग गरेको हुँ।’
विगतमा देउवाको समर्थनमा खरो उत्रने कोइरालाले आफ्नो पुरानो लय छोडेका छन्। पछिल्लो समय देउवा इतरबाट चर्को विरोध गर्नेमा महामन्त्री कोइराला अग्रपङ्तिमा देखिएका छन्।
किन चिढिए कोइराला?
सभापति देउवाले गरेका पछिल्ला निर्णयकै आधारमा महामन्त्री कोइरालासँग देउवाको दुरी बढेको छ। विधान र पद्धति भन्दा बाहिर रहेर सभापतिको निर्णय गर्ने क्रम बढेको कोइराला निकट केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।
केन्द्रीय समिति बैठक एकपक्षीय रुपमा सभापतिबाट बोलावट र देउवाले गरेका मनोनयनका कारणले पार्टीका शीर्ष दुई पदाधिकारीको सम्वन्ध चिसिएको छ। मंसिर २६ मा बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कारको नेतृत्व संस्थापन इतरबाट कोइरालाले गरे। महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने एकसूत्रीय माग उठाएको संस्थापनइतरले बहिष्कार गरे पनि पुस ११ मा संस्थापन पक्षले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्‍यो।
महामन्त्री बिनाको बैठकले निर्णय गरेसँगै कोइराला र संस्थापनको विश्वासको संकट चुलियो। केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री नै उपस्थित हुनुको दोष उनले देउवालाई दिन्छन्। ‘पार्टी भित्र विवाद बढ्दै जाँदा केन्द्रीय कार्यसमितिका पछिल्ला केही बैठकमा म पनि सहभागी हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ,’ कोइराला भन्छन्।
विधान विपरीतका विभाग गठनको प्रस्ताव, केन्द्रीय र आमन्त्रित सदस्य थपले विवादको पारो थप चढेको छ। विगतको विधानअनुसार महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र विभाग गठन भइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो। तर,सभापतिको नियमित कार्यकाल ४ वर्ष सकिएर कामचलाउ भइसकेपछि विभाग गठन गर्न थालेपछि संस्थापनइतरले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
कोइरालानिकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘औचित्यहीन विभाग गठनको कुनै अर्थ छैन।’ महाधिवेशन लक्षित गरी आफ्ना नेताको व्यवस्थापन गर्न महाधिवेशनको सम्मुखमा विभाग गठन गरिएको पौडेल पक्षको बुझाइ छ। ‘हामी विभागका प्रमुख चयन प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि गठनको औचित्य छैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘देउवासँग भएकैको व्यवस्थापन हुने हो, उनीहरूलाई जिम्मेवारी नदिएपनि ती देउवाकै हुन्।’
निकटलाई हटाएपछि दुरी बढ्यो
महामन्त्री कोइराला निकटका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारीबाट सभापति देउवाले हटाएपछि कोइरालाले त्यसको प्रतिवाद समेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको प्रवासस्थित भ्रातृ संस्था जनसम्पर्क समितिमा समेत कतिपय देशमा विवाद छ। तीमध्ये बेल्जियम जनसम्पर्क समितिको विवादले पार्टी केन्द्रमा समेत विवाद ल्याइदिएको थियो।
बेल्जियमस्थित जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष सीता सापकोटालाई पार्टी सभापतिले हटाएपछि कोइरालाले त्यसविरुद्ध प्रतिवाद गरे। गत सापकोटालाई हटाउने देउवाको पत्रलाई चुनौती दिँदै कोइरालाले सापकोटालाई सोही पदमा थमौती गरिदिए।
नवलपरासी जिल्लाका कार्यबाहक सभापतिमा देउवाले आफू निकटका विष्णुप्रसाद पौडेल ल्याएपछि दुई शीर्ष नेताको सम्बन्धमा थप दरार पैदा भएको थियो। महामन्त्री कोइराला निकटका अर्जुन पोखरेललाई हटाएर देउवाले पौडेललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए।
सभापतिको उक्त निर्णयको विरुद्धमा महामन्त्री कोइरालाले आफ्नै निवासमा आफुपक्षीय नेताको बैठक डाके। फागुन २८ मा कोइरालाकै पहलमा पौडेल पक्षका नेताहरु केन्द्रीय कार्यालयमा भेला भए। महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएको व्यक्ति कार्यवाहक जिल्ला सभापति हुन नसक्ने संस्थापन पक्षको प्रतिवाद गरे। सभापति देउवालाई विधानको स्मरण गराए। विधान धाराको व्याख्या गर्दै सभापतिलाई पत्रमा कोइराला लेख्छन्, ‘कार्यवाहक सभापति हुन नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १२ (५) ‘क’ १ बमोजिम १० वर्ष क्रियाशील सदस्य रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्ने व्यवस्था आकर्षित हुँदैन। यो व्यवस्था जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार हुनका लागि मात्रै हो।’
महाधिवेशन लक्षित कोइराला कदम
पार्टी १४ औं महाधिवेशन केन्द्रित भएसँगै कोइरालाको अभिव्यक्तिमा र व्यवहारमा बदलाव आएको धेरैको बुझाई छ। सभापतिले उपेक्षा गरेको महसुस भएर नै महामन्त्री देउवाको कार्यशैलीको विरोधमा उत्रिएको कोइराला निकटका नेताले बताए।
सभापति देउवाका निर्णयको विरुद्धमा कोइराला निवासमा संस्थापन इतरका नेताहरुको बैठकको क्रम समेत बाक्लिएको छ। कोइरालाको पछिल्लो सक्रियतामा आएको बढोत्तरीलाई महाधिवेशनसँग जोडेर हेरिएको छ।महाधिवेशनलाई मध्यनजरमा राखेर जिल्ला भ्रमण बढाउने तयारीलाई कोरोना भाइरसको प्रकोपले रोकिएको कोइराला पक्षका नेताले जानकारी दिए। गत महिना वीरगन्ज र हेटौंडामा पौडेल पक्षीय नेताको कार्यक्रममा सहभागी भएका उनले हाललाई जिल्लाका कार्यक्रम थाती राखेका छन्।
गत महिना नै कोइराला दुई पटक भारत भ्रमणमा निस्किएका थिए। ती दुई भ्रमण समेत महाधिवेशन केन्द्रित भएको आँकलन गरिएको छ। महाधिवेशनमा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ को मुद्दा उठाउने तयारीमा रहेका कोइरालाले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथसँगको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। त्यसो त गत वर्षको महासमिति बैठकमा हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा ७ सय सदस्यले हस्ताक्षर समेत गरेर नेतृत्वलाई बुझाएका थिए।
आदित्यनाथसँगको भेटमा कोइरालाले महाधिवेशन र धार्मिक सन्दर्भमा छलफल नभएको दाबी गरेपनि उनी निकट नेताले पुरै नकार्न भने सकेनन्। बनारस भ्रमणमा समेत गएका कोइराला एक सेमिनारमा सहभागी भएका थिए। उक्त भ्रमणमा कांग्रेस समर्थित जनसम्पर्क समितिका नेता कार्यकर्तासँग कुराकानी भएको बताइएको छ। ती दुवै भ्रमणको पहलकदमी नेता डा मिनेन्द्र रिजालले गरेका छन्। बनारस भ्रमणमा क्रममा केन्द्रीय सदस्य रिजाल,चन्द्र भण्डारी,दिपक गिरि लगायतका नेता सम्मिलित थिए। कोइरालाको पक्षमा हाल सबैभन्दा निकट रिजाल देखिएका छन्।
१४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारको दाबेदार कोइराला देखिएका छन्। आफ्नो समूहमा सहमति पहिल्याउन सके सोही समूहका अन्य नेतालार्ई समेत सहयोग गर्नसक्ने कोइराला निकटका नेताहरु बताउँछन्। सांगठनिक क्षमता कमजोर रहेको आरोप लाग्ने गरेका कोइरालालाई पारिवारिक विरासतले कमजोर हुन नदिने कांग्रेसजनहरुको बुझाई छ।